Shirkadda diyaaradaha ee Alaska Airlines waxay heshiis la gashay shirkadda Qatar Airways
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jebinta Wararka Qadar » Shirkadda diyaaradaha ee Alaska Airlines waxay heshiis la gashay shirkadda Qatar Airways
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Qadar • Jebinta Wararka Safarka • Jebinta Wararka Mareykanka • Safarka Ganacsiga • Investments • News • Waajib ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Laga bilaabo 1da Luulyo, heshiisku wuxuu u oggolaanayaa rakaabka diyaaradda Qatar Airways inay ballansadaan safarka oo ay si fudud ugu xirmaan in ka badan 150 dariiq oo ku teedsan shabakadda Alaska.
Alaska ayaa bilaabay iskaashiga ay la leedahay Qatar Airways bishii Diseembar 15, 2020, iyada oo awood u leh xubnaheenna Mileage Plan inay ku kasbadaan maylal duulimaadyada Qatar Airways.
Bishii Maarso 31, 2021, Alaska waxay si rasmi ah ugu biirtay oneworld waxayna ballaarisay iskaashiga ay la leedahay Qatar Airways.
Bilaha soo socda, martida Alaska waxay awood u yeelan doonaan inay qabsadaan safarada duulimaadyada Qatar Airways ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Qatar iyo wixii ka sii dambeeya.
As Alaska Airlines waxay ballaarineysaa gaadhista caalamiga ah ee ay la leedahay wada-hawlgalayaashayaga adduun-weynaha, waxaan si sharaf leh maanta ugu dhawaaqnay daah-furidda heshiis cod-wadaag ah oo lala gelayo Qatar Airways, oo xubin ka ah isbahaysiga, kaas oo sii xoojinaya iskaashiga u dhexeeya labada shirkadood isla markaana dadka safarka ah siinaya fursado xiiso leh oo ku habboon.
Laga bilaabo 1da Luulyo, heshiisku wuxuu u oggolaanayaa rakaabka Qatar Airways si aad u ballansatid safarka oo aad si fudud ugu xirtid in ka badan 150 dariiq oo ku teedsan shabakadda Alaska. Xeebta Galbeed, Qatar Airways waxay leedahay adeeg aan joogsi lahayn oo isku xiraya xarunteeda weyn ee Doha ilaa seddex ka mid ah magaalooyinka laga soo galo Alaska - Los Angeles oo laba jeer duulimaadyo maalmeed leh, iyo duulimaadyo maalinle ah oo San Francisco iyo Seattle - taas oo u oggolaaneysa isku xirnaanta bilaa cilmiga ah.
Ben Minicucci oo ah madaxa shirkada Alaska Air Group ayaa yiri “Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan qeyb ka noqono iskaashigaan soo koraya ee Qatar Airways, oo ah mid ka mid ah shirkadaha duulimaadyada ugu fiican aduunka. Maaddaama safarkii hawada ee caalamiga ahaa uu dib u bilaabmay, waxaa muhiim ah in martideena la siiyo fursado safar oo sahlan, oo ku habboon si ay uga baxaan oo ay u arkaan meelo fog fog. Duulimaadyada aan joogsiga lahayn ee Qatar Airways ee ka socda xarumaheena Seattle, San Francisco iyo Los Angeles ilaa Doha iyo meelaha ka baxsan waxay martigaliyayaasheena siinayaan fursado aad u weyn oo ay ku booqdaan ku dhowaad waddankii ay doonaan. ”
"Waxaan ku faraxsanahay inaan horumarino iskaashiga ganacsi ee aan la leenahay Alaska Airlines, waxaanan soo dhaweyneynaa xubinta cusub ee isbahaysiga adduunka ee liiska shirkadaha istiraatiijiga ah ee Qatar Airways," ayuu yiri Madaxa Fulinta ee Qatar Airways, Mudane Akbar Al Baker. "Heshiiskan, oo ay weheliso iskaashiyada aan hadda leenahay, wuxuu gacan ka geysan doonaa xoojinta joogitaankeenna gobolka iyo inaan siino rakaabka Qatar Airways ee u socdaalaya iyo kuwa ka imanaya 12-ka albaab ee Mareykanka inay helaan shabakadda ugu ballaadhan ee isku xirnaanta bilaa-xad-dhaafka ah ee Mareykanka oo dhan."
Alaska waxay billowday iskaashi ay la leedahay Qatar Airways bishii Diseembar 15, 2020, iyadoo awood u leh xubnaheenna Mileage Plan inay ku kasbadaan mayl duulimaadyada Qatar Airways. Bishii Maarso 31, 2021, Alaska waxay si rasmi ah ugu biirtay oneworld waxayna ballaarisay iskaashiga ay la leedahay Qatar Airways si ay u siiso faa'iidooyin heer sare ah oo is-weydaarsi ah, oo ay ku jiraan xulashada kuraasta la doorto; mudnaanta baaritaanka, amniga iyo hoyga; gelitaanka qolka nasashada iyo gunnada alaabooyinka dheeriga ah. Qatar Airways waxay xubin ka ahayd hal-adduun illaa 2013.
Bilaha soo socda, martida Alaska waxay awood u yeelan doonaan inay ballansadaan safarada duulimaadyada Qatar Airways ee u dhexeeya Mareykanka iyo Qatar iyo meelo ka sii fog oo ay tagayaan meelaha ay ugu jecel yihiin Afrika, Bariga Dhexe iyo Koonfurta Aasiya.